आँखाको ज्योती गुमाएका गायकको यस्तो याचना - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
आँखाको ज्योती गुमाएका गायकको यस्तो याचना
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०७२, आईतवार July 26, 2015
जीवनलाई भाग्यको खेल भनौँ या कर्मको भेल? जीवनलाई यस्तै परिभाषाको सीमामा बाँध्नु कष्टसाध्य कुरा हो । जीवनलाई सामान्य अर्थमा अथ्र्याएर जिन्दगीरूपी यात्रामा गतिमान् हुनेहरू थुप्रै छन् । आरोह– अवरोह, उतार– चढाव व्यहोरेर जिन्दगीको यात्रालाई सफलतातर्फ डोहोर्याउनेहरूको पनि कमि कहाँ छ र यो दुनियाँमा ! त्यसो त जो सफलताको बाटोमा यात्रावान् छन् तिनीहरूको जीवनको गहिराई नियाल्ने हो भने, दुःख, कष्ट अभाव र वियोगका प्रशस्त विम्वहरू भेटिन्छन् । समस्याका अनगिन्ती गल्छेँडाहरू र संघर्षका चट्टाने पहाड छिचोलेर नै उनीहरू गन्तव्यकृत भएका हुन्छन् ।
गायक प्रकाश तिमिल्सिना त्यसका एक उदाहरण हुन् । सानैमा आँखाको ज्योती गुमाएका उनी गीत र संगितका क्षेत्रमा जाज्वल्यमान नक्षत्रका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् ।
आँखा देख्नेहरूलाई त जीवनरूपी रथ चलाउन निकै दुःख भइरहेको अवस्थामा दृष्टिविहीन् भएर बाँच्न कति गाह्रो होला त्यसलाई शब्दमा उतार्न निकै कठिन छ । अहिले उनी आफ्नो आँखाको गुमेको ज्योती फर्काउन गीतको साहारा लिइरहेका छन् । आफ्नो श्वर मार्फत दुनियाँलाई वेदना सुनाउँदै उनी रकमको जोहो गर्न कस्सिएका छन् ।
सुनसरीको प्रकाशपुरमा आफ्नो परिवासँग बस्दै आएका उनी एक बर्षको छँदा उर्लंदो कोशीको भेलमा परेका थिए । ‘मिति नपुगी मर्न त्यती सजिलो कहाँ हुदो रहेछ र ! जीवनमा अनेकौं हण्डर ढक्क खान बाँकी नै थियो म बाँचेछु’ उनी आफ् दुःख लाग्दो कहानी यसरी बताउँछन् ।
नदीको भेलमा परिवारसँगै बगेको उनी माझीको जालमा परेर अल्झिएछन् । पछि उनलाई आफ्नै मितबुवाले माछा मार्नेक्रममा नदीमा फेला पारेका थिए । उनी त बाँचे तर परिवारसँगै आफ्नो ज्योती समेत गुमाउन पुगे । नदीको बालुवा आँखामा परेर उनको ज्योती गुम्न पुग्यो । निर्दयी बाढीले आमा, बुवा सहित परिवारका सवै लग्यो । उनी टुहुरा भए । उनलाई जीवित एक मात्र आफन्त हजुरआमाले लालन पालन गरेर हुर्काइन् । जीवन देखाइन् ।
चिकित्सकहरूले गुमेको ज्योती फर्कन्छ भनेपछि आँखा देखिन्छ कि भन्ने उनको आशा तेजिलो भएर आएको छ । जीवनप्रतिको विश्वासको दीप अझै प्रज्ज्वलित भएको छ ।
उनलाई अष्ट्रियाको भियना मिसन आखाँ अस्पतालका चिकित्सकहरूले आँखाको ज्योती फर्कन सक्ने बताएका हुन् । ‘गुमेको ज्योती पाइन्छ भने म गीत गाएरै रकम संकलन गर्दछु भनेर विभिन्न देशमा सयहोगका लागि निस्किएको छु’ उनले भने ‘सहयोगका लागि स्वदेशी तथा प्रवासी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा याचना पनि गरेको छु ।’ विश्वका कयौँ मुलुकमा सांगितिक यात्रा गरि सकेका गायक प्रकाश यतिवेला सहयोगका लागि जापान पुगेका छन् ।
विभिन्न देशमा पुगेर आर्थिक स्रोत जुटाइरहेको प्रकाशलाई उपचारका लागि ५० हजार अमेरिकी डल खर्च जुटाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि सहयोगी तथा सेवाको हातहरू अघि बढाउनका लागि सम्पूर्णमा अपिल समेत गरेका छन् । आफनो क्षमता र कलालाई पस्केर आँखाको उपचार गराउने अभियानमा जापानमा उनलाई कलेजका साथी मनिष सापकोटाले सघाइरहेका छन् ।
उनलाई हजुरआमाले धरानमा अर्काको घरमा मजदुरी गरेर पालन पोषण गरेकी हुन् । कयाँै पटक विराटनगरमा आखाँ उपचार गराएपनि आखाँ देख्न नसक्ने भएका प्रकाशको दैनिकी अर्काको घरमा गएर गीत गाउने र उनीहरूले स्वेच्छाले दिएको पैसा र खानाले गुजारा टरेको थियो । क्यासेटमा सुनेको भरमा गीत गाउने उनले सुरूका दिनमा चकलेट र विस्कुट पाएपछि खान पाईने रहेछ भनेर गायनलाई निरन्तरता दिएका थिए । गीत गाएर अर्काको घर धाउनेक्रममा धनकुटाका नेमधारी मण्डलको पहलमा प्राथमिक तहको शिक्षा पाएका थिए ।
धनकुटा स्कुलमा पढ्दै गर्दा वेलायती नागरिक जोहाना स्टुडको सहयोगमा काठमाडौँ आई उच्च माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन गर्ने मौका पाए । सोहीक्रममा उनी रेडियो तथा क्यासेट सुनेकै भरमा हुवहु उतार्ने गर्थे । गीत कण्ठस्त पार्दै उनी विभिन्न सांगीतिक प्रतिष्पर्धामाहरू पनि सहभागि भए । त्यसमा अब्वल ठहरिँदै गएपछि त्यही यात्रामा अघि बढ्न उनलाई हौसला समेत मिल्यो ।
आखाँ नै नदेखेपछि सोचे जस्तो केही गर्न नसकेकोमा उनी दुःखी त छन् । तर, उनले हरेस भने खाएका छैनन् र त उनी अहिले अंग्रेजी तथा केही जापानी भाषाको गीतको समेत तयारीमा पनि छन । केही नेपालीहरूको सुझावमा जापानी भाषाको गीत आवश्यक ठानेर उनले सो सम्बन्धि तयारी गरेका हुन् । आँखा देख्न सफल भएमा आफूजस्तै अपाङ्गता भएका तथा गरीब असाहयहरूको सेवामा लागि पर्ने उनको योजना छ ।
केही समयअघि ईण्डियामा भएको दक्षिण एसिया स्तरको सांगीतिक प्रतियोगितामा चाँैथो भएका थिए । नेपाली चलचित्र सहित, आधुनिक, गजल तथा पप गीत गाउने उनी लोक गीतमा पनि उत्तिकै तयारीमा पारङगत छन् । आँखाको ज्योती फर्काएर देशको लागि केही गर्ने योजना बनाएका गाएकहरूलाई यहाँहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ ।
प्रस्तुती: रामनाथ खनाल
२० दिनसम्म भारतको खर्च चलाउन सक्छन् मुकेश अम्बानी : ब्लूवर्ग प्रतिवेदन
एजेन्सी । ब्लूवर्गले रोबिनहुड सूचांक प्रतिवेदन २०१८ जारी गरेको छ । प्रतिवेदनमा ब्लूमवर्गले ४९ देशका […]
देश कुनै व्यवस्थाले नभई पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेछ
असनेपाल न्युज । बिगत १० वर्ष देखि अमेरीकामा बसोबास गरिरहनु भएका बहुप्रतिभाका धनी राम प्रसाद खनाल ५ हप्ताको […]
विगतका संघर्षले नँया इतिहास कोर्न सफल ओनसरी
कि त सहिद बन्छु कि त युद्ध जित्छु भनेर तत्कालिन माओवादीको जनयुद्धकालमा १० बर्ष सम्म भूमिगत बन्नुभएकी ओनसरी […]
‘बुबाको शव नजिक रुन छाडेर म नाटक खेलिरहेको थिएँ’
एजेन्सी,फिल्मी दुनियाँमा सन्कि र मनोमानी रुपमा चल्ने एक्टरको रूपमा परिचित नाना पाटेकर आफ्नो नयाँ फिल्म […]
सरकारी स्कूलबाट नेपाल टप गर्ने भावनाको देश सेवा गर्ने अठोट
एसएलसी परीक्षामा छात्रातर्फ नेपाल प्रथम बनेकी रुपन्देही तिलोत्तममा शान्ति नमूना उच्च माध्यमिक विद्यालयकी […]
नगण्य छन शताब्दी पुरुष सत्यमोहनका योगदानहरु
नेपाली लोकसंस्कृतिका लागि पहिलोपटक गद्य तर्फ मदन पुरस्कारद्वारा सम्मानित सत्यमोहन, बाबु शंकर जोशी र आमा […]